Marary ve ny saka? - Inona avy ireo famantarana hahitana azy? | Bezzia
Lazainay foana fa tsy miteny ny biby fiompy ary azo antoka fa marina izahay. Satria ankoatry ny orinasa omen'izy ireo anay sy ny valin-tsain'izy ireo, dia toa fantatray tsara izy ireo. Mazava ho azy fa misy lohahevitra iray tsy tadiavintsika foana: Ahoana no ahafantarako raha marary ny saka?
Indraindray isika dia afaka mahita famantarana mazava fa tsy izany foana no izy. Noho izany dia mila miahiahy mihoatra ny ilaina isika. Noho izany, anio dia avelanay ianao miaraka amin'ny famantarana vitsivitsy izay hanombohanao miahiahy fa misy zavatra mitranga Ary toy izany dia mila manatona mpitsabo vetivety haingana ianao mba hanesorana tanteraka ny fisalasalanao.
1 Fiovana eo amin'ny fahazotoan-komana
2 Fiovan'ny toetranao
3 Matory mihoatra ny mahazatra
4 Tsy mitovy famirapiratana ny volonao
5 Fotsy fotsy noho ny mavokely
6 Ny havizanana tampoka dia afaka manondro fa marary ny saka
Fiovana eo amin'ny fahazotoan-komana
Iray amin'ireo soritr'aretina mazava indrindra fa misy zavatra mitranga. Tsy mila mametraka ny tanantsika eo an-dohantsika isika, satria angamba zavatra tsy maharitra fotsiny izany, saingy marina fa fitsapana miharihary izany. Noho izany, raha hitantsika ny fihenan'ny lanjany sy ny fandoavana azy, dia tsy manana zavatra holazaina intsony isika. Mazava ho azy, amin'ny fotoana hafa, omena ny fanovana mihinana mihoatra ny mahazatra ao amin'izy ireo ary mety miresaka momba ny aretin-kibo koa na diabeta aza isika.
Fantatrao tsara fa ny saka dia biby fanaon'ny olona. Manana ny fanaony izy ireo ary sarotra be amin'izy ireo ny manova azy ireo. Noho izany, rehefa tsikaritrareo fa mitranga izany ary tsy manohy ny zavatra nataony izy ireo dia tonga ny fotoana anontaniana raha marary ny saka. Ohatra, madio tokoa izy ireo fa raha tsikaritrareo fa tsy nodiovina toy ny taloha na angamba dia lasa mankamin'ny faran'izay farany izy io ary be loatra ny fanadiovany azy dia efa omena antsika ny famantarana fa misy zavatra mitranga.
Matory mihoatra ny mahazatra
Angamba amin'izao fotoana izao dia sarotra ny mahafantatra raha marary ny saka, satria matory izy ireo dia matory ora maro. Fa raha tsikaritrareo fa mbola mandany fotoana bebe kokoa noho ny mahazatra ny masony izy, raha tsikaritrareo koa fa manandrana miafina izy na mifoha tena tsy misy lisitra dia misy zavatra tsy mety. Lazainay indray ny fiovan'ny toetrany, ny fanovana. Noho izany, tsara ny mametraka ny tenanao eo am-pelatanan'ny manam-pahaizana mba hijery izany.
Tsy mitovy famirapiratana ny volonao
Tianay ny mahita ny volon'ny volony manaparitaka izany. Satria mitovy dika amin'ny fahasalamana sy hatsarana. Saingy indraindray tsy dia toy izany ary hitantsika ny lafiny mifanohitra. Izany hoe, ho tsikaritsika fa very ilay famirapiratana ankoatr'izay indraindray dia ho tsikaritro fa misavoritaka kokoa. Noho izany, manomboka hanontany tena isika fa misy zavatra mitranga. Etsy andaniny, Eny, mety misy ifandraisany amin'ny aretina sasany, fa amin'ny iray hafa dia mety noho ny sakafo izany. Izany hoe, mila soatoavina mahavelona izay tsy entiny ilay biby.
Fotsy fotsy noho ny mavokely
Marina izany ny siligaoma dia mazàna mavokely, izay manondro fahasalamana fototra. Indraindray anefa dia hitantsika fa miseho amin'izy ireo ny loko fotsy. Noho izany, iray amin'ireo marika mazava ireo fa misy aretina tafiditra ao amin'ny totohondry zareo. Ny iray amin'izy ireo dia tsy fahampian-dra, fa marina fa mety misy antony hafa maro hafa. Raha tsy fahampian-dra dia tena hiaraka amin'ny fahalemena na havizanana koa ankoatry ny tsy fahampiana rano sy fihenan'ny lanja. Ka mba hialana amin'ny fisalasalana dia tsara foana ny manatona ny mpitsabo biby.
Ny havizanana tampoka dia afaka manondro fa marary ny saka
Marina fa efa mety kamo izy ireo. Fa rehefa milalao kosa dia omeny ihany koa ny azy rehetra. Noho izany raha mahatsikaritra fiovana mahery vaika ianao, mety hoe manaitra antsika zavatra any aoriany izy io. Raha tsy te hilalao izy, raha somary tsy mitana lisitra izy dia mety manana karazana olana ara-pisefoana. Na dia tsy afaka mifantoka amin'ny soritr'aretina tokana aza isika na amin'ny famaranana tokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Mascotas » Ahoana no ahafantarako raha marary ny saka?